Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – La soco wixii soo kordha | WSDOT
Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – La soco wixii soo kordha
homeConstruction & planningOnline open housesGu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509La soco wixii soo kordha
Ma doonaysaa in aad la socoto hawlaha mashruuca iyo fursadaha mustaqbalka ee aad kaga qeyb qaadani kartid? Waa kuwan dhowr siyaabood oo aad ugu xirnaan karto inta aan ka shaqeyneyno inaan dhameystirno SR 509 marka la gaaro 2029:
Isdiiwaangeli si aad ugu hesho wararka mashruuca iyo macluumaadka emailkaaga.
Nagu soo Biir SR 509 Dhamaystirka Mashruucii ugu horreyay ee farsamada Weydii Injineerka dayrtan.
La wadaag wixii aad baratay asxaabtaada iyo deriskaaga baraha bulshada
Kaalay nagula sheekayso munaasabada iyo kullamada agagaarkaaga:
Bandhiga Strawberry Burien, Juun 18-19
Maalmaha Kent Cornucopia, Luulyo 8-10
Suuqa Beeraleyda Kent, Luulyo 20
Muusiga SeaTac gudaha Beerta, Luulyo 27
Suuqa Beeraleyda Des Moines, Sebtembar 10
Ka wac khadka macluumaadka dhismaha 206-225-0674 ama si toos ah noogu soo dir iimayl: sr509construction@wsdot.wa.gov.
Ciwaanka VI-aad Ogeysiinta Dadweynaha
Waa siyaasadda Waaxda Gaadiidka Gobolka Washington (WSDOT) in ay xaqiijiso inaan qofna, iyadoo loo eegayo jinsi, midab, asal qaran, sida uu dhigayo Ciwaanka VI ee Xeerka Xuquuqda Madaniga ah ee 1964, laga saarayo ka qaybgalka loo diido faa’iidooyinka, ama si kale loogu takooro mid ka mid ah barnaamijyadeeda iyo hawlaheeda. Qof kasta oo aaminsan in la jebiyey ilaalinta ciwaanka VI, waxa uu u dacwoon karaa Xafiiska Fursadaha Loo Simanyahay ee WSDOT(OEO). Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nidaamyada cabashada Title VI iyo/ama macluumaadka ku saabsan waajibaadyada takoor la’aanta, fadlan kala xidhiidh xidhiidhiyaha Ciwaanka VI ee OEO (360) 705-7090.
Macluumaadka Xeerka Naafada Ameerika (ADA)
Macluumaadkan waxa lagu heli karaa qaabab kala duwan adiga oo iimayl usoo diraya Xafiiska Fursadaha Loo Simanyahay ee wsdotada@wsdot.wa.gov ama adoo wacaya si bilaashah 855-362-4 ADA( 4232). Dadka dhegaha la’ ama dhegooluhu waxay samayn karaan codsi iyagoo wacaya Gudbinta Gobolka Washington 711.